UnderWater Camera အား ကမာရွတ် တွင်​ ipivi.com မှတဆင့်​ ဝယ်​ယူပါ။
1080 Hd ရိုက်နိုင်ပါတယ်။
Car ထဲမှာ Record မှတ်ဖို. ဖြစ်ြဖစ်
ဘယ်နေရာမဆို တပ်ပြီး အသုံးပြုနိုင်တဲ့
ရေအောက် ၃၀မီတာ အထိ ယူသွားပြီး ဓာတ်ပုံ
Video များ ရိုက်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ထောင့်ဖြတ် ၁၄၀ ဒီဂရီအထိ ရိုက်နိုင်မှာပါ။
တစ်ခါ အားသွင်းပြီးရင် ၁နာရီခွဲအထိ အသုံးပြုနိုင်ပါမယ်။
အကြာကြီး အသုံးပြုချင်တယ် ဆိုရင်တော့ Power bank နဲ. အသုံးပြု
ဈေးနှုန်း – 25000
1080 Hd ရိုကျနိုငျပါတယျ။
Car ထဲမှာ Record မှတျဖို. ဖွဈွဖဈ
ဘယျနရောမဆို တပျပွီး အသုံးပွုနိုငျတဲ့
ရအေောကျ ၃၀မီတာ အထိ ယူသှားပွီး ဓာတျပုံ
Video မြား ရိုကျနိုငျမှာ ဖွဈပါတယျ။
ထောငျ့ဖွတျ ၁၄၀ ဒီဂရီအထိ ရိုကျနိုငျမှာပါ။
တဈခါ အားသှငျးပွီးရငျ ၁နာရီခှဲအထိ အသုံးပွုနိုငျပါမယျ။
အကွာကွီး အသုံးပွုခငျြတယျ ဆိုရငျတော့ Power bank နဲ. အသုံးပွု
စြေးနှုနျး – 25000
Delivery free in Yangon (Downtown ၆မွို.နယျသာ)
အမည်: UnderWater Camera